Calanka Falastiin oo laga taagay xarunta Qaramada Midoobey - BBC News Somali
Calanka Falastiin oo laga taagay xarunta Qaramada Midoobey
1 Oktoobar 2015
Image caption Israa'iil ayaa horey ugu soo horjeesatay in calanka Falastiyiniinta laga taago xarumaha Qaramada Midoobey.
Calanka Falastiiniyiinta ayaa markii ugu horreysay laga taagay xarunta Qaramada Midoobay ee magaalada New York.
Arrintaasi waxaa soo dhaweeyay dadka Falastiyiniinta ah iyo hoggaamiyeyaashooda oo ku tilmaamay in ay tahay tallaabo horey loo qaaday.
Dad dabaaldegyo ayaa isugu soo baxay qaybo kala geddisan oo ka tirsan dhulka Falastiyiniinta kaddib markii ay maqleen in calankooda laga taagay xarunta Qaramada Midoobay ee magaalada New York.
Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay ayaa horraantii bishan ogolaaday Falastiiniyiinta in calankooda ay ka taagtaan dhismayaasha Qaramada Midoobay, inkastoo aanay aheyn dal xubin ka ah hay'adaasi.
Hoggaamiyaha Falastiiniyiinta, Maxamuud Cabaas, oo ka hadlayay kulanka Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay ayaa waxa uu sheegay in Falastiyiniintu aysan mardambe u xayirnaan doonin heshiisyo lala galo Israa'iil, waxa uuna ku eedeeyay Israa'iil in ay sii waddo kutumashada Heshiiskii Oslo, ee la saxiixay sanaddii 1993-dii:
Sidoo kale Maxamuud Cabaas waxa uu ugu baaqay caalamka in uu ilaaliyo danaha Falastiiniyiinta.